फुट्याे जसपा बाबुराम भट्टराईले भने– अब भेडा भेडासँग, बाख्रा बाख्रासँग लागौँ
May 30, 2021 N88LeaveaComment on फुट्याे जसपा बाबुराम भट्टराईले भने– अब भेडा भेडासँग, बाख्रा बाख्रासँग लागौँ
काठमाडाैं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टी विभाजनतर्फ संकेत गर्दै एउटै पार्टीभित्र दुई धारको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरुलाई आआफ्नो बाटो लाग्न आग्रह गरेका छन्। उनले समयले नयाँ ध्रुविकरण खोजिरहेको बताउँदै अब विचार मिल्नेहरु एकातर्फ लाग्ने बेला भएको बताएका छन्। ‘अहिलेको राजनीतिक संकट पुरानो विचार, पार्टी र नेतृत्वको सामूहिक विघटनको अभिव्यक्ति हो। […]
May 30, 2021 N88LeaveaComment on सरकारी पैसामा खाजा खाएको भन्दै फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री मरिनमाथि अनुसन्धान
एजेन्सी । फिनल्यान्डको प्रहरीले त्यहाँकी प्रधानमन्त्री सन्ना मरिनमाथि अनुसन्धान गर्ने भएका छन्। ट्याबलोइड पत्रिका इल्तालेहतीले प्रधानमन्त्री मरिनले सरकारी पैसामा बिहानको खाजा खाने गरेको समाचार लेखेपछि प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान गर्ने भएको हो। समाचारअनुसार ३५ वर्षकी मरिनले आफ्नो खाजाको लागि महिनामा सरकारी रकमबाट ३ सय युरो छुट्याएकी छिन्। प्रहरीले पनि विज्ञप्तीमा भनेको छ,‘प्रधानमन्त्रीले केहीपटक सरकारी पैसा खाजामा […]
May 30, 2021 N88LeaveaComment on उज्वलको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै गगनले लेखे यस्तो ट्विट
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद गगनकुमार थापाले विवेकशील नेपाली दलका पूर्वसंयोजक उज्वल थापाको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै ट्विट गरेका छन्। नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा उपचाररत थापाको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै गगनले भनेका छन्, ‘प्रिय उज्वल, तिम्रो परिवारसँगै, हामी साथी र शुभेच्छुक पनि तिम्रो शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरिरहेका छौँ। हामीलाई विश्वास छ, तिमी छिट्टै […]
May 30, 2021 N88LeaveaComment on ७५३ स्थानीय तह : कुन तहलाई कति बजेट (विवरणसहित)
काठमाडाैं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण नीति अनुरुप ७५३ स्थानीय तहलाई नै बजेट वितरण गरेको छ । पूर्व ताप्लेजुङदेखि पश्चिम कैलालीसम्मका स्थानीय तहहरुमा अनुदानमा बजेट वितरण गरेको सरकारले स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा कुल २ खर्ब ८३ अर्ब १ करोड ४७ लाख विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये महानगरपालिकाका लागि […]
एउटा गूरुले कोभिडका कारण निधन भएकी स्व.शिष्यालाई लेखेको मार्मिक कविता ‘चढाएँ शब्द अर्पण’
May 30, 2021 N88LeaveaComment on एउटा गूरुले कोभिडका कारण निधन भएकी स्व.शिष्यालाई लेखेको मार्मिक कविता ‘चढाएँ शब्द अर्पण’
-टंक प्रसाद पन्थ काेराेना दुष्ट ए तैँले कतिका ज्यान यी लिइस् ? मारेर बैँसमै मान्छे के यस्तो ताडना दिइस् ? लिएर दैत्यकै रूप भताभुङ्ग सबै गरिस् बाँच्ने ती कलिला इच्छा बेप्रवाह सबै हरिस् !! मान्छेका मन यी भाँचिस् रुवाइस् अझ धर्धरी घतविघतकाे वास्ता गर्दैनस् किन ए छली ? उत्पत्ति कहाँ हाे तेरो के गर्ने […]
बजेटबारे गगन थापाकाे प्रतिक्रिया
May 30, 2021 N88LeaveaComment on बजेटबारे गगन थापाकाे प्रतिक्रिया
काठमाडाैं । कांग्रेस नेता गगन थापाले नेपालको संविधानले संसदबाहिरबाट बजेट ल्याउने कुरा कल्पना पनि नगरेको बताएका छन् । ‘संसद् नभएको वेलामा बजेट ल्याउने कुरा संविधानले कल्पना पनि गरेको छैन, यो चरम अलोकतान्त्रिक र अनैतिक काम हो,’ थापाले भने । उनले संविधानले जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको यथार्थ भए पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसको दुरुपयोग […]
प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्लामा खनियो बजेट, साना ठूला योजनाको चाङ
May 30, 2021 N88LeaveaComment on प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्लामा खनियो बजेट, साना ठूला योजनाको चाङ
काठमाडाैं । प्रदेश १ को राजधानी समेत रहेको विराटनगरलाई खासै छुन नसकेको संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेट प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृह जिल्ला झापामा भने खातैखात लागेको छ ।झापा जिल्ला त्यसमा पनि तीनवटा ठूला कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको गृहनगर र एउटा कमल गाउँपालिकामा परेका छन्। बजेटले अधिकांश विकास पूर्वाधारको निर्माण दमकमा केन्द्रीत भएको देखिन्छ […]
May 30, 2021 N88LeaveaComment on सार्वजनिक संस्थानमा २८ हजार बढी रोजगारी
काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रत्यक्ष रूपमा २८ हजार ३६४ जना रोजगारीमा आबद्ध छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी जनोपयोगी क्षेत्रका संस्थानमा १३ हजार ४०४ र सबैभन्दा कम व्यापारिक क्षेत्रका संस्थानमा एक हजार २७९ रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रका संस्थानमा कर्मचारीको सङ्ख्या आव २०७५/७६ मा दुई हजार १५६ रहेकामा आव २०७६/७७ […]
भेटियो ‘हावाबाट फैलने’ को रो ना भाइरसको नयाँ भेरिअन्ट
May 30, 2021 N88LeaveaComment on भेटियो ‘हावाबाट फैलने’ को रो ना भाइरसको नयाँ भेरिअन्ट
काठमाडाैं । भियतनाममा हावाबाट छिट्टै फैलने कोरोनाभाइरसको नयाँ भेरियन्ट पहिचान भएको छ। जुन भारतीय तथा यूके भेरियन्टको मिश्रित स्वरूपमा देखिएको बीबीसीले जनाएको छ। भियतनामका स्वास्थ्यमन्त्री गुयन थान्ह लङ्गले त्यसलाई ‘निकै खतरनाक’ भएको बताएका छन्। भाइरसहरू उत्परिवर्तन भइरहन्छन् र धेरैजसो भेरियन्टहरू महत्वपूर्ण हुँदैनन् तर केहीले भने भाइरसलाई थप सङ्क्रामक बनाउँछन्। सन् २०२० को जनवरीमा पहिलो पटक […]
माधव नेपाल र झलनाथले सधैका लागि छाडे एमाले, नयाँ पार्टीको घोषणा !
May 30, 2021 May 30, 2021 N88LeaveaComment on माधव नेपाल र झलनाथले सधैका लागि छाडे एमाले, नयाँ पार्टीको घोषणा !
काठमाडौँ । विपक्षी दलको संयुक्त वक्तव्यमा ‘नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता’ माधवकुमार नेपालले हस्ताक्षर गरेकामा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आपत्ति प्रकट गरेका छन्। आज बिहान नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र यादव पक्ष), राष्ट्रिय जनमोर्चा र एमालेको माधव नेपाल पक्षले सरकारविरुद्ध संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका […]